Abavelisi beekota ze-Aprons -iTshayina abaThengi beVenkile yeHlabathi kunye neMveliso
I-Waiter Chef Apron Canvas Half Apron U3061D037049U
Brand CHECKEDOUT Item Code U3061D037049U Ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagama aphambili aqhekeza iapron, itafile yokulinda isilwanyana, itafile ifonti Umbala 85/15 weplastikhi / umqhaphu Ukuthunga Umsonto wePolyester ukwabizwa ngokuba ngumsonto wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester ayihambelani ne-corrosion, ukumelana nethambisi, ...
I-White Poly Cotton Waiter Long Waist Apron U316S0200A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U316S0200A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili ngesiqingatha, isiqingatha esimnyama esinqeni esinqeni, ifaskoti yesaphetha, umlindi weefron, ikhitshi lasekhitshini Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, akukho-shrink, akukho-carcinogens, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa ye ...
Umlindi oMnyama wePotton Umlindi oMde U-Apron U316S0100A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U316S0100A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili isiqingatha, isiqingatha esimnyama esinqeni, isithsaba esinqeni, umpheki we-apron, umlindi weefron, ikhitshi lasekhitshini Indwangu 65/35 iplashini / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, akukho-shrink, akukho-carcinogens, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa ye ...
I-White Potton Chef Chef elide i-Apron eneepokotshi i-U311S0200A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U311S0200A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili kwisiqingatha esikhulu, isiqingatha esimnyama esinqeni, ifaskoti esinqeni, umpheki we-apron, umlindi weefron, ikhitshi lasekhitshini Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, akukho-shrink, akukho-carcinogens, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa ye ...
Umnyama uPoteni oMnyama Wokuphetha okude kwe-Apron Ngeepokotshi U311S0100A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U311S0100A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili kwisiqingatha, umnyama esinqeni esinqeni, isithsaba esinqeni, umpheki we-apron, umlindi weefron, ikhitshi lasekhitshini Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, akukho-shrink, akukho-carcinogens, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa ye ...
I-Grey Poly Cotton Waiter elide i-Apron enePocket U306S0500A enye
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U306S0500A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili aphathwayo ngepakethi, i-apron yokulinda, i-apron yesinqe, i-apron yesiqingatha, isifuba se-apron Indwangu 65/35 iplashini / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, akukho zi-carcinogens, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ...
I-Wine ebomvu yePoteni Ikotoni yewistoni ende I-Apron enePocket U306S0400A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U306S0400A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili aphathwayo ngepakethi, i-apron yomlindi, ifreyiti emnyama Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, life service iphindwe kabini njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukulunga okuhle ...
I-White Potton Waiter ende U-Apron onepokotho enye U306S0200A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U306S0200A Ubungakanani INDLELA YOKUZIPHATHA Amagama aphambili ngepokotho, i-apron yomlindi, i-apron emnyama, i-apron eyi-Indwangu 65/35 ipolar / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, akukho-piling, akukho-shrink, akukho-carcinogens , ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ...
I-Black Poly Cotton Waiter elide i-Apron enePocket enye ye-U306S0100A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U306S0100A Ubungakanani INDLELA YOKUZIPHATHA Amagama aphambili ngepokotshi, isikhombisi sokulinda, isinqe esimnyama Indwangu 65/35 iplashini / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ngumtya omde wokuthambisa, akukho pilisi, akukho kuncipha, akukho khokho iphindwe kabini njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukulunga okuhle ...
I-White Potton Waiter ende i-Apron enePocket enye kunye neTowel Loop U302S0100A-1
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U302S0100A-1 Ubungakanani BUNYE SIZE Amagama aphambili, isilinda, isalfure, isiqhamo se-apron Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, Ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukulunga okuhle kwe-abrasion ...
Umdaka omnyama wePotton Waist ende eyi-Apron enePocket enye kunye neTowel Loop U302S0100A-1
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U302S0100A-1 Ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagama aphambili, isilinda se-apron, isinqe esimnyama Indwangu 65/35 ipilisi / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ngumtya omde wokuthambisa, akukho pilisi, akukho kuncipha, akukho kharaveni, inkonzo yenkonzo iphindwe kabini njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukumelana kakuhle ne-abrasion, ...
Umbala oMdaka oMdaka kwiPotton Ilitha ende U-Apron U302S0500A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U302S0500A Ubungakanani INDLELA YOKUZIPHATHA Amagama aphambili, isilinda-apron, isinqe esimnyama Indwangu 65/35 isininzi / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, life service 2 amaxesha njenge-chef eqhelekileyo. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukumelana kakuhle ne-abrasion, jonga ...